नेपालमा कहाँ–कहाँ जाँदैछन् राष्ट्रपति मुखर्जी ?
नेपालमा कहाँ–कहाँ जाँदैछन् राष्ट्रपति मुखर्जी ? राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले विमानस्थलमा स्वागत गर्ने
काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी तिन दिने नेपाल भ्रमणका लागि आज मध्यान्ह त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्दैछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मुखर्जीलाई स्वागत गर्नेछिन् । त्यसपछि मुखर्जी विमानस्थलबाट सिधै शितलनिवास पुग्नेछन् । शितल निवासमा दुई देशका राष्ट्रपतिबीच शिष्टाचार भेटघाट हुनेछ ।
शितलनिवासबाट मुखर्जी लैनचौरस्थित भारतीय दुतावास पुग्नेछन् । उनी भारतीय दुतावासमा कर्मचारीसँग भेटघाट तथा निरिक्षणपछि होटल ह्यातमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।
ह्यातमा उनले उच्चस्तरिय भेटवार्ता गर्नेछन् । राष्ट्रपति भण्डारीले मुखर्जीको स्वागतमा बेलुका होटल सोल्टिमा रात्रीभोजको आयोजना गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरु, कुटनीतिक नियोगका प्रमुख, उच्च पदस्थ अधिकारी लगायतको सहभागिता रहनेछ । भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी बिहीबार बिहान पशुपतिमा विशेष पुजाका लागि जानेछन् । उनले पशुपतिनाथमा आधाघण्टा विशेष पुजा गर्ने बताइएको छ ।
त्यसपछि उनी नेपाली सेनाको मुख्यालयमा काठमाडौं युनिभर्सिटीले गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । बिहीबार दिउँसो नै काठमाडौं महानगरपालिकाले गर्ने नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागि हुनेछन् । होटलमा फर्किएपछि उनले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । उनी शुक्रबार बिहान जनकपुर जानेछन् । जानकी मन्दिरको दर्शनपछि उनलाई नागरिक अभिनन्दन गरिनेछ । उनी त्यहाँबाट सिधै पोखरा जानेछन् । पोखरामा भारतीय सैनिक क्याम्पमा भुपु भारतीय सेना तथा उनीहरुका परिवारसँग भेटवार्ता गर्नेछन् । उनी पोखराबाट काठमाडौं फर्किएर नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नेछन् ।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एउटा पक्षले अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गैरकानुनी र दण्डनीय कार्य गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ... ३ घण्टा पहिले
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फेरि पार्टी सभापति बन्न अभ्यास थालेका छन् । यसअघि सार्वजनिक खपतका लागिमात्र आफू... ४ घण्टा पहिले
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाढीले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी–कोदारी क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षतिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरएका छन् । शनिबार सभामुख सापकोटा र... ७ घण्टा पहिले
खनाल–नेपाल पक्षीय अनेरास्ववियुद्वारा सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई राहत वितरण
काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधव नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले सिन्धुपाल्चोकको बाढी पहिरो प्रभावित लाई राहत वितरण गरेको छ ।... शुक्रबार, असार ४, २०७८